मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोख्रेल पनि आउट !
July 7, 2021 N88LeaveaComment on मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोख्रेल पनि आउट !
काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेट पनि प्रस्तुत गर्यो। तर संसदमा बहुमतसहित पारित हुनु पर्ने प्रदेशको बजेट पारित हुन अँझै सकेको छैन। बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी सांसदहरुले बजेट छलफलका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए। आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि पोख्रेललाई चुनौती दिएको बिपक्षी घटकको बिरोधकै कारण […]
चितवनबाट अर्की २१ वर्षीया युवती आठ दिनदेखि बेपत्ता, को हुन?
July 7, 2021 N88LeaveaComment on चितवनबाट अर्की २१ वर्षीया युवती आठ दिनदेखि बेपत्ता, को हुन?
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की सुजिता भण्डारी मृत अवस्थामा भेटिएको घटनाले चितवन तातिरहेको बेला चितवनबाट नै अर्की एक युवती हराएकी छिन् । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १४ गतेदेखि बेपत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ । परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका–४ का प्रवेश […]
रहेनन् बलिउडका दिग्गज कलाकार दिलिपकुमार
July 7, 2021 N88LeaveaComment on रहेनन् बलिउडका दिग्गज कलाकार दिलिपकुमार
एजेन्सी । बलिउडका दिग्गज अभिनेता दीलिपकुमारको निधन भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जुन ३० मुम्बईको हिन्दुजा अस्पतालमा भर्नामा भएका उनको बुधबार उपचारका क्रममा निधन भएको ह। उनी ९८ वर्षका थिए। विभिन्न रोगले सताएका उनी यसअघि जुन ६ मा पनि अस्पताल भर्ना भएर उपचारपछि डिस्चार्ज्ड भएका थिए। बलिउडमा ‘ट्रयाजेडी किङ’ उपनाम पाएका दीलिपकुमारले फिल्म क्षेत्रमा ६ […]
बादलसहित पूर्वमाओवादी नेताहरूले ‘प्रचण्ड’लाई मुद्दा हाल्ने, यस्ताे छ अभियाेग !
July 7, 2021 N88LeaveaComment on बादलसहित पूर्वमाओवादी नेताहरूले ‘प्रचण्ड’लाई मुद्दा हाल्ने, यस्ताे छ अभियाेग !
काठमाडाैं । विभाजनको डिलैमा पुगेर स्थित भएको नेकपा एमालेको राजनीति २/३ दिनदेखि स्थितर छ। पार्टीभित्र विवाद बढेपछि निष्क्रिय बनेको कार्यदलको बैठक पनि सोमबारदेखि शुरु भएको छ । सोमबार विगतको समीक्षा गरेर सकिएको छलफलमा मंगलबारदेखि विषयगत छलफलहरु सुरु भएका छन् । यद्यपी मंगलबारको छलफलमा पनि कुनै खास सहमति हुन सकेन । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा […]
सशस्त्र प्रहरीले कालापानीमा देखायाे बहादुरी, भारतीय एसएसवीलाई चुनाैतीदिँदै राख्याे यस्ताे प्रस्ताव
July 7, 2021 N88LeaveaComment on सशस्त्र प्रहरीले कालापानीमा देखायाे बहादुरी, भारतीय एसएसवीलाई चुनाैतीदिँदै राख्याे यस्ताे प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रमा निर्मित काली मन्दिरसम्मै आफूले बिनाअवरोध गस्ती र आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) समक्ष राखेको छ । नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको गत साता भएको बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बैठक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीदेखि २ सय […]
July 7, 2021 N88LeaveaComment on संसदीय समितिले ‘लाल बाकस’ फेला पार्न सकेन
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको एक समितिले तत्कालीन राजदरबारमा रहेको लाल बाकस फेला नपारेको जनाएको छ। ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राखिएको लाल बाकस अहिलेसम्म गायब भएको छ। त्यो बाकस फेला पारेमा सन्धि सम्झौता, सीमासम्बन्धी नक्साको सूची रहेको तथ्य फेला पर्ने इतिहासविद्को भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले इतिहासविद्सँगको छलफलपछि लाल […]
July 7, 2021 N88LeaveaComment on एक मात्रा लगाए हुने खोप ल्याइँदै
काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्ध एक मात्रा लगाए पुग्ने ‘जेन्सेन’ खोप ल्याइने भएको छ । अमेरिकी फर्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित कोभिडविरुद्धको खोप ‘जेन्सेन’ कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा नेपालले पाउन लागेको हो । जोन्सनको ‘जेन्सेन एडी२६.सिओभी.२’ एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो । यो खोपलाई पहिलो पटक गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले आपत्कालीन उपयोगका लागि […]